Isolwa Ngokugwazisa Othisha Inyunyana
You are at:Home»isiZulu»Isolwa Ngokugwazisa Othisha Inyunyana
By Johan Pretorius on July 3, 2014 isiZulu
INYUNYANA yothisha eMzumbe iSouth African Teachers Union (SADTU) isikhahlele nga zombili imiko yephephandaba eliphuma ngilweZithathu yokuthi kunezinsolo zokugwazelwa kwezikhundla ezikoleni ezakhele igatsha elaziwa ngesiyaqhubeka.
Leliphephandaba liveza ukuthi kukhona othisha abakhokhiswa imali bese bethenjiswa ukuqhoqhobala izikhundla nokuthiwa uma sekuyisikhathi senhlolokhono kusuke sekugcinwa icala sekwaziwa ukuthi ngubani ozothatha leso sikhundla abanye basuke imali isuke seyahamba phambili.
Imithombo ithi okukhalisa kakhulu ukuthiothisha bachitha isikhathi sabo belungiselela inhlolokhono kanti sebeyoba izimpelesi kulabo abasuke sebevele beqashiwe sebazi ukuthi sebewutholile umsebenzi.
“Labo abafuna ukuba ngothisha nhloko sebeyesaba ngoba bayazi ukuthinoma bangazimisela kanjani kodwa angeke basithole isikhundla. Izikole ezithintekayo kulezi zigameko yiNkomba Primary kanye noMswilili Jonuor Primary okuthiwa vele sezinabo abantu abazoqhoqhobala kodwa inhlolokhono ibe ingakenziwa” kusho uMthomboesinalo igama lawo kodwa esingeke salidalula.
Omunye umthombo uthi izikole ezike zathinteka kulo mkhonyovu yi Malusiesikhundleni se HOD, Mdlangaswa kwesePhini likathishanhloko kanyenase Nduma Junior Secondary nokuthiwa othisha abase begwazile bagcine bengaqalanga esikoleni ngoba kwasuka esinamathamba kwaze kwagcina sekungenelela ngisho abe School Governing Body (SGB).
Omumye wemithombo ukuqinisekisile lokhu waze waveza nokuthi babili kuphela abantu abenza lomkhuba.
Umobhala weSiyaqhubeka Branch uMnu Siya Ngubo uthe lokho okushiwoyo kungamanga aluhlaza waze wathi kukhona nje abazama ukuhlakaza I nyunyana
“Kukhona lapho kukhangiswa khona izikhala uma zikhona lokhu abakushoyo ukuzama ukudicilela isithunzi senyunyana” kubeka ungubo
Experience the Maiden Ceremony Zulu tradition
Kugxekwe Imibhikisho Enodlame Esifundazweni